Ukubonisa umkhondo kwimephu kaGoogle kunye neKML | Martech Zone
Ukubonisa umkhondo kwimephu kaGoogle kunye neKML
NgoLwesibini, Matshi 18, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Olu luhlobo lweCandelo 2 ekuboniseni imizila (amacandelo emigca) kwimephu.
Kunyaka ophelileyo ndincedisile Umzila weNkcubeko waseIndiya ngokwenza imephu ibhayisekile yenkcubeko kunye neendlela zokuhamba ezakhiwayo eIndianapolis zisebenzisa uGoogle Earth. Icandelo 1 yayiyindlela yokusebenzisa uMhlaba kaGoogle ukucwangcisa iindlela zakho kwaye uzithumele kwelinye ilizwe Ifayile ye-KML.
Ngokuhlwanje, ndigqibile ukuthumela imephu ebikade ihleli kulawulo lwam lokuvavanya Ian Ukutyhala uye kwi Umzila weNkcubeko we-Indy indawo. Oku kuyakuvumela iindwendwe ukuba zisondeze, zitshintshele kumbono wesathelayithi, kwaye zinxibelelane nemephu ngakumbi kunomfanekiso omileyo.
Yongezwe ekuphuthumeni kwam kokugqibezela ukuba ndithethe noGail Swanstrom noBrian Payne (Mongameli, Isiseko soLuntu saseCentral Indiana) NgoMgqibelo emva komsitho weBill McKibben. UGail noBrian bobabini ngabantu abakhohlakeleyo- banobubele, bazele ngamandla, kwaye ke banomonde. Khange ndikwazi ukubaphoxa.
Iprojekthi enye ezantsi! Bambalwa abaseleyo ukuya! Xa imephu iposelwe, ndiza kuyivuselela le posi ngekhonkco.
tags: geocodegeolocationiimaphu zikagoogleKMLkml ifayileIndlela
IHubris yoThengiso lweGeocentric
Ukwenza uninzi lwaMandla akho okwenza imali
Mar 19, 2008 ngo-11: 02 AM
Mar 19, 2008 ngo 4:20 PM
Iposti enkulu. Ndisebenza kolunye uhlobo "lwendlela yokufumana eyona ndlela" edityaniswe nevenkile / indawo yokutyela / njl njl ukunceda nje ukufumana abaqhubi ngeyona ndlela ibalaseleyo kunye nokuma okungcono ngale ndlela. Iya kuba yeyokwenene esekwe kwiimephu zikaGoogle, ke le posi injengesipho esiKhulu soLwazi kum 🙂 Kanye ngexesha elifanelekileyo
Umsebenzi omhle. Enkosi.
Mar 20, 2008 ngo 12:05 PM
Imephu yeNdlela yeNkcubeko ye-Indianapolis iyaphila!